Dhul dhif ah: maxay yihiin, astaamo, adeegsi iyo muhiimaddiisa | Cusbooneysiinta Cagaaran
Markaan falanqeyno walxaha miiska xilliyada, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ka hooseeya oo lagu yaqaan magaca dhulka dhif ah. Waxaa laga helaa gunta jadwalka xilliyeed ee walxaha oo la'aantood nolosheennu lamid noqon lahayd sidaan ognahay. Dhulkan dhifka ah awgeed, inta badan aaladaha teknolojiyada sare sida taleefannada gacanta, kombiyuutarrada, iwm waa la soo saari karaa.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dhulalka dhifka ah iyo astaamahooda.
1 Waa maxay dhulalka dhifka ah
3 Qoondaynta dhulka
4 Waa maxay lanthanides
Waa maxay dhulalka dhifka ah
Sidaan soo sheegnayba, kuwani waa biro aan dhif iyo naadir ahayn sida magacu sheegayo, laakiin way adag tahay soo saaristeeda. Taasina waa guud ahaan haku ururin macdanta. Haddii aan isku darsano naadiridan biraha iyo baahida codsiyada teknolojiyada sare, waxaa jira dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeed oo kala duwan oo dhulka dhif ah ka dhiga mid aad u xiiso badan.
Waa taxane ka kooban walxo kiimiko ah oo laga helo dhulka hoostiisa oo muhiim u ah in badan oo ka mid ah teknoolojiyadda aan maanta haysanno. Tusaale ahaan, qayb weyn oo ka mid ah macaamiisha elektarooniga ah, kombiyuutarada iyo shabakadaha, isgaarsiinta, tamar nadiif ah, daryeel caafimaad, yareynta deegaanka, difaaca qaranka, gaadiidka horumarsan, iyo kuwo kale ayaa adeegsada dhul dhif ah.
Waana kuwo aad caan u ah mahadsanidiin magnetic, luminescent iyo electrochemical guryaha. Kuwani waa sifooyin gaar ah dhammaan walxahaasna waxay ka caawiyaan in badan oo ka mid ah tiknoolajiyada inay si wax ku ool ah oo keliya u qabtaan laakiin sidoo kale miisaan culus. Waxaan sidoo kale yareyn karnaa qiiqa iyo isticmaalka tamarta. Sidan oo kale, waxaan ku imaaneynaa tiknoolajiyadda hadda jirta waxtarka, waxqabadka, xawaaraha, adkeysiga iyo xasilloonida kuleylka. Alaabooyinka ay kujiraan tikniyoolajiyadda dhulka dhifka ah waxay gacan ka geystaan ​​kobcinta dhaqaalaha adduunka iyadoo la ilaalinayo heerarka sare ee nolosha iyo xitaa badbaadinta nolosha.
Aynu aragno dhulka dhifka ah iyo astaamahooda Waxaan ognahay in xagga faro badnaanta dhulka qoloftiisa aysan si gaar ah naadir u ahayn. Si kastaba ha noqotee, astaamaha u gaarka ah waxaa u sabab ah qaab dhismeedka atomkiisa. Waxay leeyihiin isku dheelitir elektaroonig ah oo ka dhigaya inay ka duwan yihiin walxaha kale ee ku jira miiska xilliyada. In kasta oo dhammaan dhulalka dhifka ah ay wadaagaan qaar ka mid ah guryaha muhiimka ah, kuwa kale ayaa si gaar ah ugu gaar ah cunsurrada gaarka ah. Isku ekaanshaha kiimikada awgood, waxay ka soo muuqdaan macdanta iyo dhagxaanta wayna adag tahay in midba midka kale ka soocnaado. Tan waxaa lagu magacaabaa isku xirnaanshaha kiimikada.
Dhul dhif ah Waxay noqdeen kuwa aad caan ugu ah mahadsanid tirada badan ee adeegsiga wax ku oolka ah ee lasiiyay iyaga oo ugu mahadcelinaya sifooyinka kiimikada ay leeyihiin. Waxay ku gaar yihiin canaasiir gaar ah, sidaa darteed caqabada ah kala-soociddooda waa in laga gudbaa.
Waxaa jira dhowr nooc oo dhul dhif ah marka loo eego sifooyinkooda kiimikada, marka laga reebo qaab dhismeedka atomkooda. Cabbirka sidoo kale waa muuqaal lagu kala soocayo. Xajmiga atomiga ee lanthanides ayaa hoos u dhacaya iyadoo la kordhinayo tirada atomiga. Tani waxay keenaysaa in dhulalka dhifka ah ee ka khafiifsan laga sooco dhulka dhifka ah ee culus. Waana in labadaba lagu soo saaro macdano kala duwan.
Tusaale ahaan, haddii aan xusno lutetium, waxaan aragnaa in si fudud loogu beddeli karo cunsurro kale oo ku jira macdanta halkaasoo goobaha laga heli karaa ay aad u yar yihiin. Xeryahooda dhif ah guud ahaan waa wax laga xumaado oo aad u deggan. Ka mid ah oksaydhka waxaan ka helnaa qaar ka mid ah kuwa ugu xasilloon. Inta badan lanthanides waxay leeyihiin xaalad murugo leh.
Aan aragno maxay yihiin kala-soocyada kaladuwan ee dhul-dhifka ah loo qaybiyo. Midka hore waa lanthanoids kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin dhul naadir ah. Aan aragno waxa ay yihiin:
Dhinaca kale waxaan leenahay dhulal culus oo dhif ah kuwaas oo ah kuwa soo socda:
Cunsurka kaliya ee aan laga helin liiskan si dabiici ah waa promethium. Waan ognahay in dhamaan isotopes-keedu yahay shucaac, sidaa darteed waxaa lagu abuuri karaa oo keliya retaroolayaasha nukliyeerka. Si dabiici ah lagama heli karo dhulka.
Waa maxay lanthanides
Xaqiiqdii markii aad baratay miiska xilliyeed ee ku siiyay xiisaha waxaad ka ogtahay lanthanides. Ku saabsan yahay walxaha aad ugu badan dhulka qoloftiisa oo ay u muuqdaan kuwo aad u adag in laga soo saaro. Kaliya kuma adka inay soo saaraan, laakiin tiro la isticmaali karo. Badanaa way dhalaalayaan caadi ahaanna midab midabkeedu yahay. Markii ay soo gaadhaan oksijiinta, waxay leeyihiin inbadan oo midabkan qalinka ah. Waxaa lagu gartaa inay yihiin kuwo falcelin badan leh, in kasta oo aysan ahayn kuwo qarxa, waxay si dhakhso leh u qiiqi karaan taas oo ka dhigaysa inay u nugul yihiin wasakhda ka timaadda waxyaalaha kale.
Waan ognahay taas Dhammaan lanthanides iskuma qooraan isku heer. Tusaale ahaan, lutetium iyo gadolinium waxay hawo u geli karaan waqti dheer waqti aan dheecaan lahayn. Dhinaca kale, waxaan leenahay cunsurro kale oo lanthanide ah sida lanthanum, neodymium iyo europium oo aad u falceliya waana in lagu keydiyaa saliidda macdanta si looga fogaado qiiqa.
Dhammaan xubnaha ka tirsan kooxda lanthanide waxay leeyihiin muuqaal jilicsan oo aad u siman. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si fudud loogu gooyn karaa mindi mana u baahna qalab culus oo lagu daaweeyo. Waxyaabaha loo arko inay yihiin dhul dhif ah looma tixgeliyo habkan maxaa yeelay way adag tahay in la helo. Si fudud ayaa loo tixgeliyaa habkaas tan iyo markii way adag tahay in laga soo saaro tiro ku filan qaab saafi ah si ay u awoodaan inay qanciyaan mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah baahiyaha warshadaha. Adiga oo aan awoodin in aad ku jirtid tirada lagama maarmaanka u ah soo saarista wax soo saarka teknoolojiyadda, waxba tari maayaan.
Dhulalkaasi waxay leeyihiin khatar dhab ah oo suuq ah oo ah inay noqdaan wax soo saar xoog leh. Waxaan ognahay in Shiinuhu leeyahay xaddiga ugu badan ee keydka dhulka dhif iyo naadir ah kana faa’iideysto. Waxay aad ugu badan yihiin qaraabada dhulka dushiisa, laakiin uruurinta la ogaan karo ama ka yar ee caadiga ah ayaa ka badan inta badan macdanta kale. Tani waxay ka dhigeysaa soosaaridaada mid aad u qiimo badan. Baahida caalamiga ah ee dhulalka dhifka ah ayaa la filayaa inay kordho iyada oo loo adeegsanayo gawaarida, elektarooniga macaamiisha, nalalka tamarta ku shaqeeya, iyo soosaarayaasha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dhul dhif iyo naftooda ku sifoobaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Dhul dhif ah